Maamulka Degmada Waajid Oo Kormeeray Xabsiga Dhexe Ee Degmadaasi – idalenews.com
Kormeerkan maanta ay sameeyeen kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga maamulka degmada Waajid ee gobalka Bakool Cadow C/raxmaan Jugle ayaa waxaa ay uga kuur galayeen xaaladda guud iyo amniga degmada.
Gudoomiye Cadow C/raxmaan ayaa kormeerkan waxaa ku wehlinayay taliyaha ciidanka booliiska degmada Waajid Cali Xasan Ibraahim, iyagoona kormeeray Saldhiga booliiska degmada oo Burbur xoogan ka muuqday.
Cadow C/raxmaan ayaa sheegay in saldhiga booliiska hadda uu u baahan yahay diyactir lagu sameeyo taana uu ka dalbaday maamulka koonfur galbeed soomaaliya.
Waxaa uu sidoo kale gudoomiyaha sheegay in meelaha kormeerkan ay ku sameeyeen kamid ahaayd goobaha caafimaadka iyo waxbarashada kuwaasi oo aan tayo lahayn.
Dhinaca kale taliyaha saldhiga degmada Waajid Cali Xasan Ibraahim oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in nabadda ka jirta degmadaasi ay tahay mid wanaagsan sidoo kalena ciidamada amaanka koonfur galbeed ay u taagan yihiin difaaca shacabka deegaanka.
Taliye Cali Xasan ayaa sheegay in ciidamada maalin walba meel qiyaastii Waajid u jirta 30KM ay ka sameeyaan howlgalo lagu xaqiijinayo amaanka degmada.
Kormeerkan maanta ay sameeyeen maamulka degmada Waajid ee gobalka Bakool ayaa ah mid loogu kuur galaayay xaaladda ay ku nool yihiin bulshada reer Waajid.